Sergio Ramos Ma Yahay Daafaca Ugu Fiican Abid Kubadda Cagta? Halkan Kaga Boggo Natiijada Codbixin Laga Qaaday Jamaahiirta Kubadda Cagta – Laacibnet.net
Sergio Ramos Ma Yahay Daafaca Ugu Fiican Abid Kubadda Cagta? Halkan Kaga Boggo Natiijada Codbixin Laga Qaaday Jamaahiirta Kubadda Cagta
Hal maalin kaddib guushii weyneyd ee 3-1 ka ahayd ee ay kooxdiisa Real Madrid kasoo hoysay dhigeeda Barcelona, shabakadda caanka ah ee bixisa Ballon d’Or ee France Football ayaa akhristayaasheeda weydiisay haddii uu kabtan Sergio Ramos yahay daafaca abid ugu wanaagsan kubadda cagta.
Ramos ayaa sii wada inuu qabsado boggaga hore ee saxaafada ka faaloota kubadda cagta kaddib guushii kooxdiisa isaga oo kamid ahaa xiddigaha shabaqa Barcelona gaadhay kaddib rigoorihii uu dhaliyay.
France Football ayaa akhristayaasheeda weydiisay haddiiba uu Sergio Ramos yahay daafaca ugu wanaagsan taariikhda kubadda cagta? akhristayaasha ayaa jawaab cad bixiyay.
Sergio ayaa helay codka jamaahiirtii coddaysay oo 62% ay ugu coddeeyeen inuu yahay daafaca dhexe ee abid ugu wanaagsan.
Ramos ayaa isku qoray boggag badan oo kamida taariikhda kubadda cagta Spain waxaana uu yahay daafaca abid ugu goolasha badan horyaalka La Liga.
Dhinaca kale mid kamida tayooyinka waaweyn ee 34 sano jirkan ayaa ah tuurista rigoorooyinka waxaana uu haystaa rekoodhka ah inuu gool u bedelay 25-kii rigoore ee ugu dambeeyay ee uu tuuray waana xog aysan ku gaadhayn xiddigaha hormoodka u ah jiilkan ee Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi.
Coddayntan ayaa imanaysa toddobaadyo kaddib markii ay France Football ku dareen Ramos daafacyada ay u xusheen xulashadooda “Ballon d’or Dream Team” isaga oo kula soo baxay liiska halyeeyada kala ah Beckenbauer, Baresi, Cannavaro, Sammer, Moore, Pasarella, Koeman, Scirea iyo Desailly.
Ugu dambayn, Sergio Ramos ayaa 22 koob oo waaweyn kula soo guuleystay kooxda uu tababaraha u yahay haatan waxaana kamid ah afar Champions League halka uu heer qaran kasoo hantay koobab Euro iyo koob aduun.